गरिबी माथीको दमन: रोड छेउमा मकै बिच्दै गरेकी बुढीआईमाई सँग डिस्काउन्ट खोज्ने, होटेलमा सयौं टिप्स दिन सक्ने ? – सुदूरखबर डटकम
गरिबी माथीको दमन: रोड छेउमा मकै बिच्दै गरेकी बुढीआईमाई सँग डिस्काउन्ट खोज्ने, होटेलमा सयौं टिप्स दिन सक्ने ?
label समाचार प्रकाशक query_builder September, 09 2019
मकै बिक्रेता : पोलेको मकै किन्न आएकी केटिले भनिन् एउटा मकै को कति पर्छ ?
मकै बिक्रेताले जवाफ दिए – एउटाको १० रुपैया !
केटिले- भनिन् मलाई १५ रुपैयाँमा दुईवटा मकै दिनुहोस् !
बिक्रेता – बिहान देखि एउटापनी बिक्री भको छैन ठिक छ १५ रुपैया मा २ वटा मकै लानुहोस् !
केटीले चिठ्ठा परेको जसरी खुशी हुदै मकै लिएर आफ्नो पार्क गरेको गाडी तर्फ लागिन ! र , एउटा मकै साथिलाई दिइन् र एउटा आफैंसंग राखिन र भनिन १० रुपैयाँ गोटा भन्दै थ्यो १५ मा दुईवटा ल्याकी छु ! 😂
ती दुबैजना केटिहरु नजिकैको रेस्टुरेन्टमा गए खानेकुरा अर्डर गरे आधा खाए आधा त्यही छाडेर काउन्टरमा गए र बिल बुझाए बिलमा ४५० थियो ५०० दिए र ५० टिप्स राख्नु भन्दै केटिहरु त्यहाँबाट हिंडे !
धनी रेस्टुरेन्ट मालिकको लागि ५० रुपैयाँ टिप्स सामान्य थियो ! तर ति मकै बेच्ने वालाको लागि ५ रुपैयाँ नै ठूलो !गरिब किसानको मकै किन्दा ५ रुपैयाँ कममा मकै पाउदा संसार नै जितेको महसुस गर्ने अनि धनी रेस्टुरेन्ट वाला लाई टिप्स दिनै नपर्ने ठाउँमा किन यति धेरै उदार..??? कतै तपाई हामीबाट पनि सडकमा मकै,तरकारी,फलफुल इत्यादी किन्दा यस्तै व्यवहार त भईरहेको छैन ?
(फेसबुकमा हामीले भेटेर उचित लागेर साभार गरेका हौ, यसका लेखक को हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा नभएको कारण नाम राखेका छैनौ )